ဒူဒူကြီး: Photoelectric sensor (၄)
Distance-settable sensors တွေမှာ၊ position detector လို့ခေါါတဲ့2part photo diode ကို၊ receiver အနေနဲ့ sensor housing မှာတတ်ဆင်ထားပါတယ်။ sensing object ရွှေ့လျှားမှုကြောင့် ဖြစ်ပေါါလာတဲ့၊ trangulated reflected beam concentration ပြောင်း လဲမှုမှ တဆင့်၊ sensing object ရဲ့ distance အပြောင်းအလဲကို၊ receiver မှ sense လုပ်ပါတယ်။ object ဟာ၊ sensor နဲ့ အနီးကပ်ဆုံး အကွာအဝေး သို့၊ ရောက်လာခြင်းကို N (near) end လို့ သတ်မှတ် ပြီး၊ အဝေးဆုံးအကွာအဝေးသို့၊ ရောက်သွားခြင်းကိုတော့ F (far) end အဖြစ်သတ်မှတ်ပါတယ်။
Fig. Distance-settable sensor
N end နဲ့ F end တို့အလယ်၊ set position မှာ၊ object ရှိနေတဲ့အခါ၊ reflected light ဟာ၊2part photo diode ရဲ့ အလယ်နေရာသို့၊ အလင်းပြန်ပြီး၊ photo diode ရဲ့ အစွန်း နှစ်ဖက်လုံးမှာ၊ ညီမျှတဲ့ အလင်းပြန်မှုကို၊ ရရှိမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ sensing object ဟာ၊ sensor နဲ့ အနီးကပ်ဆုံး အကွာအဝေးသို့၊ ရွှေ့လျှားလာတဲ့ အခါ၊ reflected light ဟာ triangulation အနေနဲ့2part photo diode ရဲ့ N end အစွန်းမှာ၊ ပိုမိုကျရောက်မှာ ဖြစ်သလို၊ object ဟာ၊ set distance position ကိုကျော်လွန်ပြီး၊ sensor နဲ့ အဝေးဆုံးအကွာ အဝေး သို့၊ ရွှေ့လျှားသွား ရင်တော့ reflected light ဟာ၊ F end အစွန်းကိုသာ၊ ပိုမိုကျရောက်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ N end နဲ့ F end တို့မှာဖြစ်ပေါါတဲ့ light intensity ကွာခြားချက်မှတဆင့်၊ sensing object position ကို၊ sensor မှတွက်ယူပါတယ်။
distance-settable sensors တွေကို၊ BGS လို့ခေါါတဲ့ Background suppression sensor နဲ့ FGS လို့ခေါါတဲ့ Foreground suppression sensor ဆိုပြီး၊ ခွဲခြားအသုံးပြုကြပါတယ်။ BGS နဲ့ FGS တွေကို၊ object အပေါါမှ နီးနီးကပ်ကပ်တတ်ဆင်ပြီး၊ sense လုပ်နိုင်ပါတယ်။
Fig. BGS - Background suppression sensor နဲ့ FGS - Foreground Suppression sensor
object ရဲ့ surface condition နဲ့ colour တို့ဟာ၊ sensor အပေါါ effect မဖြစ်ပေမယ့်၊ object ရဲ့ background ကတော့၊ sensor အပေါါမှာ အနည်းငယ်သက်ရောက်မှု ရှိတတ်ပါတယ်။ conveyor လို background object တွေ အပေါါမှာ၊ ရွှေ့လျှားတဲ့ application တွေ အတွက်၊ BGS လို့ခေါါတဲ့ background suppression function distance-settable sensors တွေကို၊ သုံးကြပါတယ်။
black paper ထက်၊ ပိုမှောင်တဲ့ objects တွေဟာ၊ extremely low reflectance တနည်းအားဖြင့် အလင်းပြန်မှု ပမာဏ အလွန်နည်းပါး မှာဖြစ်သလို၊ mirror လို objects တွေကတော့၊ အလင်းပြန်မှုပမာဏ အလွန်များမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ glossy surfaces လို၊ objects တွေဟာ လည်း အလင်းပြန်မှုပမာဏများသလို၊ အလင်းတန်းတွေ ဟာ၊ random directions အနေနဲ့၊ ဖြာထွက်မှာဖြစ်ပါတယ်။ ပြန်လင်းတန်းဟာ၊ receiver မှလက်ခံရမယ့် specified light intensity ပမာဏထက်နည်းနိုင်၊ များနိုင်တဲ့၊ applications တွေနဲ့ object ဟာ set distance နဲ့ အနီးကပ်ဆုံးအကွာအဝေးအထိသာရွှေ့လျှားတဲ့ applications တွေမှာတော့ FGS function sensors တွေကို၊ သုံးကြပါတယ်။
အလင်းတန်းတွေဟာ၊ random directions အနေနဲ့၊ ဖြာထွက်တဲ့အခါ၊ receiver မှာ chattering effect ဖြစ်ပေါါ နိုင်တဲ့အတွက်၊ OFF delay timer တလုံးကို၊ FGS function sensor နဲ့တွေဖက်ကာသုံးသင့်ပါတယ်။
Limited-reflective Sensors တွေကတော့၊ Diffuse-reflective Sensors တွေလိုအလုပ်လုပ်ပါတယ်။ emitter နဲ့ receiver တို့ကို တတ်ဆင်ထားပုံအရ၊ regular-reflection light ကိုသာ၊ လက်ခံနိုင်ပြီး၊ object ကို specific distance ဆိုတဲ့၊ သတ်မှတ်ထားတဲ့ အကွာ အဝေးအတွင်းမှာသာ၊ detect လုပ်နိင်ပါတယ်။ object ဟာ receiver ရဲ့ reception area အတွင်းရှိနေစဉ်မှာ၊ sense လုပ်ပြီး၊ reception area ကိုကျော်လွန်ကာ object ရွှေ့လျှားသွားတဲ့ အခါ၊ detect မလုပ်နိုင်တော့တဲ့အတွက် reception over lap အဖြစ်သတ်မှတ်နိုင်ပါတယ်။
Fig. Limited-reflective Sensor
limited-reflective sensors တွေကို၊ object အပေါါမှနီးနီးကပ်ကပ်တတ်ဆင်ပြီး၊ sense လုပ်နိုင်သလို၊ object ရဲ့ colour ကြောင့် sensor မှာ၊ effect မဖြစ်ပေါါစေနိုင်တာတွေ့ရပါတယ်။ ဒါပေမယ့် glossiness လို့ခေါါတဲ့ smooth, shiny, lustrous surface တွေလို ပြောင်လက်နေ တဲ့ object တွေနဲ့၊ inclination လို့ခေါါတဲ့ disposition နဲ့ bent တွေ လို၊ အထစ်တွေ၊ အကွေးအဝိုက် ပုံသဏ္တွန်တွေရှိတဲ့ object တွေကို၊ detect လုပ်တဲ့အခါ၊ sensor မှာ effect ဖြစ်ပေါါနိုင်ပါတယ်။
electrical components တွေတတ်ဆင်ထားခြင်းမရှိပေမယ့်၊ Optical Fiber Sensors တွေကို၊ Photoelectric sensor အဖြစ်သတ်မှတ် နိုင်ပါတယ်။ Optical Fiber Sensors တွေ ဟာ noise နဲ့ environmental influences တွေ ရဲ့၊ သက်ရောက်မှုကို highly resistant အနေနဲ့၊ ခံနိုင်ရည် ရှိပါတယ်။
Fig. Optical Fiber Sensor
Optical fiber မှာ high refractive index central core ကို၊ low refractive index cladding မှ၊ surrounded အနေနဲ့  ဖုံးအုပ်ထား ပါတယ်။ အလင်းတန်းဟာ core ထဲကိုဝင်လာတဲ့အခါ၊ core ရဲ့ နံရံမှာဖြစ်ပေါါမယ့် repetitive total internal reflection ဟာ၊ refractive cladding ကြောင့်ကျဆင်းသွားပြီး၊ အလင်းတန်းဟာ optical fiber မှ၊ အထက်အောက် 60° ခန့်ဖြာထွက်ကာ၊ sensing object ကို strikes အနေနဲ့ သက်ရောက်ပါတယ်။ optical fiber တွေရဲ့ cross section တည်ဆောက်ပုံအရ၊ Flexible type (multi-core), Standard type (single core) နဲ့ Robot type (bundled) ဆိုပြီးခွဲခြားထားပါတယ်။
Flexible type (Multi-core) optical fibers တွေကို၊ soft electrical wiring အနေနဲ့ အသုံးပြုနိုင်ပြီး၊ 1 mm radius အထိကွေးလို့ရသလို၊ bending ဟာ light intensity ကိုမထိခိုက် နိုင်တာ၊ တွေ့ရပါတယ်။ Standard type (single core) optical fibers တွေကိုတော့ 10 ~ 25 mm radius အထိသာကွေးလို့ ရပေမယ့်၊ long sensing distances application တွေမှာ၊ light transmission အနေနဲ့ efficient ဖြစ်တာ တွေ့ရပါတယ်။ Robot type (bundled) optical fibers တွေဟာ၊ အလွယ်တကူမပျက်စီးနိုင်တဲ့၊ damage resists optical fibers တွေဖြစ်တဲ့အတွက်၊ robot hands ကဲ့သို့၊ moving parts တွေမှာ၊ attached အနေနဲ့၊ တွဲဖက်အသုံးပြုလေ့ ရှိပါတယ်။
ဒါ့အပြင် bending-resistance characteristics အနေနဲ့၊ Repeated bending: 1,000,000 times min - တမိနစ်မှာ၊ အကြိမ် တသန်းအထိ အကွေးအဆန့်၊ ခံနိုင်ရည်ရှိပြီး၊ allowable bending radius အနေနဲ့4mm အထိကွေးလို့ ရတာကို၊ တွေ့ရပါတယ်။
Optical Fiber Sensors တွေကို၊ "intrinsic sensors" ဆိုတဲ့၊ sensing element အဖြစ်အသုံးပြုနိုင်သလို၊ "extrinsic sensors" ဆိုတဲ့၊ signals ကိုသယ်ဆောင်ပေးသွားမယ့်၊ remote sensor အဖြစ်ပါအသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။
optical fiber ကို၊ transducer အဖြစ်၊ အသုံးပြုထားတဲ့ Intrinsic sensors တွေကို၊ strain, temperature, pressure နဲ့ အခြား quantities တွေတိုင်းတာဖို့အတွက် အသုံးပြုလေ့ရှိပါတယ်။ Intrinsic sensors တွေဟာ optical fiber ကို၊ transducer အဖြစ်၊ အသုံးပြု ထားပြီး၊ strain, temperature, pressure နဲ့ အခြား quantities တွေကို တိုင်းတာနိုင် ပါတယ်။ တနည်းအားဖြင့် optical fiber မှာဖြစ်ပေါါလာမယ့်၊ intensity, phase, polarization, wavelength နဲ့ light transit time အစရှိတဲ့၊ modulated light wave parameter တွေမှ တဆင့်၊ detect လုပ်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
Fig. Evanescent wave generation
Fig. Raman scattering
Optical Fiber ကိုအသုံးပြုပြီး၊ temperature ကိုတိုင်းတာတဲ့အခါ၊ temperature ပြောင်းလဲမှုကြောင့်၊ အလင်းတန်း မှာဖြစ်ပါါလာမယ့် evanescent loss မှတဆင့်၊ amplifier unit မှာတိုင်းတာခြင်းဖြစ်ပြီး၊ တခါတရံမှာတော့ အလင်းတန်းမှာ ဖြစ်ပါါလာမယ့် Raman scattering မှတဆင့်၊ amplifier unit မှာတိုင်းတာပါတယ်။ Electrical voltage ကိုတိုင်းတာတဲ့ အခါ၊ nonlinear optical effects အနေနဲ့တိုင်းတာခြင်းဖြစ်ပြီး၊ voltage သို့မဟုတ် electric field ကြောင့်ဖြစ်ပေါါလာတဲ့ light ရဲ့ polarization မှတဆင့်၊ amplifier unit မှာ တိုင်းတာပါတယ်။
Fig. Long-period fiber grating
optical fiber တမျိုးဖြစ်တဲ့ LPG - long-period fiber grating တွေကို direction recognition အတွက် အသုံးပြုလေ့ရှိသလို၊ seismic နဲ့ sonar applications တွေမှာလည်း၊ hydrophonesအဖြစ်၊ optical fibers တွေကို၊ အသုံးပြုကြပါတယ်။ တနည်းအားဖြင့် underwater-microphone အဖြစ်အသုံးပြုခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ electrical နဲ့ magnetic filed ပြင်းထန် များပြားတဲ့နေရာတွေမှာ၊ fiber optic microphone တွေနဲ့ fiber-optic based headphone တွေကို အသုံးပြုပါတယ်။ ဒါ့အပြင်optical fibers တွေကို၊ Distributed temperature sensing အဖြစ်၊ အပူရှိန်အရမ်း မြင့်မားတဲ့နေရာတွေမှာ၊ temperature တိုင်းတာဖို့၊ အသုံးပြုကြသလို၊ interferometric sensors တွေအဖြစ်၊ လေယာဉ်တွေရဲ့ gyroscopes မှာတတ်ဆင် အသုံးပြုလေ့ရှိပါတယ်။
middle and high voltage range (100–2000 V) တွေကို၊ တိတိကျကျတိုင်းတာဖို့၊ polarimetric detection အနေနဲ့၊ fiber-optic AC/DC voltage sensor တွေကိုအသုံးပြုပါတယ်။ electrical arc flash ဖြစ်ပေါါတဲ့အခါ၊ fiber-optic sensor မှ transmit light အနေနဲ့လက်ခံရယူပြီး၊ digital protective relay သို့ပေးပို့ကာ၊ breaker ကို tripping အဖြစ်ဖြုတ်ချနိုင်တဲ့အတွက်၊ electrical switchgear control ကဲ့သို့၊ အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။
Fig. 1.25 Gbit/s multi-mode fiber
multi-mode optical fiber cable အသုံးပြုထားတဲ့၊ Extrinsic sensors တွေကို vibration, rotation, displacement, velocity, acceleration, torque နဲ့ twisting တွေကိုတိုင်းတာဖို့အသုံးပြုလေ့ရှိပါတယ်။ conventional sensors တွေနဲ့ တွဲဖက်အသုံးပြုတဲ့အခါ၊ electrical out put ကို optical signal အဖြစ်ပြောင်းလဲပေးဖို့လိုအပ်ပြီး၊ non-fiber optical sensor သို့မဟုတ် electronic sensor နဲ့ optical transmitter တို့ကို၊ modulated light ပို့ဆောင်ပေးပါတယ်။
platinum resistance thermometer လို၊ conventional sensor နဲ့တွဲဖက်အသုံးပြုတဲ့အခါ၊ temperature ပြောင်းလဲမှုမှ resistance ပြောင်းလဲမှုမှကိုသာ ရရှိတဲ့ အတွက်၊ electrical power supply ကိုပေးသွင်းဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ resistance ပြောင်းလဲမှုမှရရှိလာတဲ့ modulated voltage output ကို၊ optical fiber သို့ transmitter အနေနဲ့ပေးပို့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
optical fiber cable တွေကို inaccessible ဆိုတဲ့ အတွင်းထဲကိုအလွယ်တကူ၊ ရောက်ရှိဖို့ မလွယ်တဲ့ တိုင်းတာမှုမျိုးမှာ၊ တတ်ဆင် အသုံးပြုလေ့ရှိပါတယ်။ ဥပမာ ဂျက် လေယာဉ်တွေရဲ့ engine အတွင်းပိုင်းမှ၊ temperature ကိုတိုင်းတာတဲ့အခါ၊ optical fiber ကိုအသုံးပြုပြီး၊ fiber cable မှာရရှိလာတဲ့ radiation ကို၊ engine အပြင်မှာတတ်ဆင်ထားတဲ့၊ radiation pyrometer သို့ပေးပို့ကာ၊ ဖတ်ယူပါတယ်။ အလားတူ transformers တွေရဲ့ temperature ကို တိုင်းတာတဲ့အခါ၊ optical fiber ကိုအသုံးပြုပြီး၊ fiber cable မှာရရှိလာတဲ့ electromagnetic field ကို၊ ပေးပို့ကာ၊ ဖတ်ယူပါတယ်။
Image credit to : http://www.omron.com.au/, http://www.photonics.cusat.edu/, http://en.wikipedia.org/
Posted by ကိုထွန်း at 04:07